तनहुँमा ट्रक र बस ठोक्किँदा १९ जना घाइते - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home ट्रेन्डिङ तनहुँमा ट्रक र बस ठोक्किँदा १९ जना घाइते
दमौली । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ रिमाल्नीमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा १९ यात्रु घाइते भएका छन् ।
दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जाँदै गरेको ना ७ ख ६२६८ नं को ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ७ ख ४४२४ नं को बस एकआपसमा ठक्कर खाँदा बस चालकसहित १९ यात्रु घाइते भएका हुन् ।
दुर्घटनामा घाइते बस चालक चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–२७ का ४२ वर्षीय किरण काफ्लेसहित १९ यात्रुको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । बस चालक काफ्लेको हात, खुट्टा र गालामा चोट लागेको छ । ट्रक र त्यसका चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस किशोर किशोरीका लागि गहकिलो खुराक ‘सेकुवा’
यसैगरी पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत व्यास नगरपालिका–१२ घाँसीकुवामा गए राति भएको कार दुर्घटनामा छ जना घाइते भएका छन् । कावासोतीबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको बा १३ च ८४८१ नं को कार अनियन्त्रित भई सडकबाट पल्टदा छ जना घाइते भएका हुन् । घाइते सबैको दमौलीस्थित रत्नहरि अस्पतालमा उपचार पश्चात् डिस्चार्ज भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Editor-Picks तुलसी भण्डारी - November 25, 2020
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै एक हुनुपर्छ : शेरधन राई
भगीरथ भण्डारी - September 14, 2020
इलाम । प्रदेश नं १ का मूख्य मन्त्री शेरधन राईले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै एक हुनुपर्ने बताएका छन् । १ नं. प्रदेश स्तरीय...
पवित्रकुमार शाही - April 23, 2020
विरेन्द्रनगर । मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट कर्णालीमा फर्किएका बालबालिका बाटोमै अलपत्र परेका छन् । लकडाउनका कारण काठमाडौंलगायतका देशका...
कोरोना भाइरसबाट निको भएकी युवती भन्छिन् “मेरो रगतले रहस्य पत्ता लगाउनेछ”
Breaking News लाउरान नीगार्ड र मार्शल रिजेल - April 3, 2020
न्यूयोर्क । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको थाहा पाउँदा त्रासले श्वास नै अबरुद्ध भएको अनुभव टिफानी पिन्क्नीको दिमागमा अझै ताजै छ । न्यूयोर्क शहरकी...
फ्रान्समा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या घट्दो
विदेश एजेन्सी - May 14, 2020
पेरिस । फ्रान्समा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरुको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ । यहाँका अधिकारीहरुले यसलाई नियन्त्रणउन्मुख भएको भनेका छन् । यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा...
सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्न समस्या
Exclusive कौशिला कुँवर - September 9, 2020
काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का हातमा पारी मल आयात अलपत्र पार्ने सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्ने भएको छ ।...
Exclusive नवराज पहाडी - February 22, 2020
लमजुङ । लमजुङमा निर्माणाधीन माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित माथिल्लो दोर्दी...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - October 31, 2020
बिचार कृष्णहरि बास्कोटा - November 25, 2020
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार विपिन घिमिरेले आफ्नो नयाँ गीत खास लाग्न थाल्यौं...को भिडियो मंगलबार युट्युबमार्फत रिलिज गरेका छन् । दुई दशकदेखि गायनमा सक्रिय...
एम के माझी - November 26, 2020
भगीरथ भण्डारी - November 25, 2020
यो पनि पढ्नुहोस ओलीको प्रतिवेदन निकास दिने खालको भएन : प्रभु साह